Chassis mkpọtụ obere mkpọtụ na-akwado kaadị 3
1. Shei nke onye na-egwuputa ihe nwere ahụ mara mma juputara n'àgwà, dị ka nwa / oroma / akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ.A na-eji efere igwe oyi na-atụ oyi 1mm mee ya, a na-agwọkwa elu ya site na nhazi ájá, nke siri ike ma na-adịgide adịgide.
2. The silent eth Ngwuputa ikpe na-onwem na B85 chipset na ụlọ ọrụ-obosara nwa afọ PCIE oghere interface.Ya mere, ọ nwere ike ndakọrịta.
3. Ụlọ ọrụ pụrụ iche ike shunt osisi imewe, ndịna-emeputa kaadị na-akwado iche iche, iji gbochie motherboard si overloading, ibelata ihe ize ndụ nke motherboard mebiri, na-eme ka ndịna-emeputa kaadị na-arụ ọrụ kwụsie ike.
4. Ejiri ya na 3500RPM ngwa ngwa ngwa ngwa na nnukwu oghere na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ, nke nwere ike ibelata mkpọtụ mgbe ọ na-eburu n'uche ikpo ọkụ nke igwe na-egwuputa ihe.
5. 70mm oghere oghere, nkwado kaadị ogologo 330mm, dakọtara na ọtụtụ ndịna-emeputa kaadị na ahịa.
6. E nwere kaadị eserese na-arụ ọrụ ọkụ LED n'ihu panel, nke nwere ike ịchọpụta ọnọdụ ọrụ nke kaadị eserese n'oge ọ bụla.N'otu oge ahụ, ọ nwekwara ihu HDMI interface, USB interface, wired netwọk interface, na TF kaadị oghere, nke dị mma maka mgbasawanye na ndị ọzọ enyi na enyi.
Nkọwa foto isi: Ihe nlereanya a nke igwe Ngwuputa na-abịa ọkọlọtọ na 800W ike ọkọnọ.N'ihi ụdị agbapụ dị iche iche, ihe ngosi oroma na foto bụ isi bụ nke nwere ike 1600W;Ihe nlere ojii ahụ nwere ike nke 800W.
1. Olee mgbe anyị nwere ike nweta azịza?
A ga-aza ajụjụ ọ bụla n'ime awa iri na abụọ.
2. Enwere m ike itinye LOGO m na shei nke onye na-egwuputa ihe?
Ee, anyị nwere ike ịnye ọrụ ODM/OEM, biko ziga ozi wee kpọtụrụ ndị ọrụ anyị.
3. Ebee ka ị na-ebu ụgbọ mmiri?
Ụlọ ọrụ anyị dị na Dongguan City, Guangdong Province, China, anyị ga-esi na ọdụ ụgbọ mmiri Shenzhen ma ọ bụ Guangzhou ụgbọ mmiri.
Nke gara aga: Kaadị Ngwuputa RX580 maka gpu mining rig
Osote: Oghere chassis dị jụụ 70mm
Motherboard 3 kaadị in-line / PCIE/ oghere 70mm
Agba panel ihu Oji / oroma / akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ
Ịnye ọkụ 4U: 800W/1600W
Onye ofufe 2 Fan (DN09cm) 3500RPM
mkpọtụ na-arụ ọrụ (ya na kaadị eserese RX588 na ọkọnọ ike 800W)
Nha chassis 370MM(L)*430MM(W)*170MM(H)
Ncheta: Igwe na-egwuputa ihe na-agbachi nkịtị abụghị mkpọtụ.E jiri ya tụnyere ígwè ọrụ ndị na-egwuputa ihe na-emekarị, mkpọtụ ahụ dị ntakịrị.A na-ekpebi uru mkpọtụ site na kaadị eserese, ọkụ ọkụ na gburugburu ojiji ị na-ahazi.
Nnwale a bụ ụdị kaadị 3 nwere kaadị eserese 3 RX588 na nkwụnye ọkụ 800W.
Ọkwa mkpọtụ nke chassis nke onye na-egwuputa ihe na-agbachi nkịtị metụtara kaadị eserese na ọkụ ọkụ, yabụ uru mkpọtụ ikpeazụ dabere na nhazi n'ezie.